နန်းသီရီမောင်ရဲ့ ဆွဲမက်စရာ ပုံရိပ်လေးများ……. – Shan Ma Lay
July 24, 2021 aung aungLeaveaComment on နန်းသီရီမောင်ရဲ့ ဆွဲမက်စရာ ပုံရိပ်လေးများ…….
ချစ်ပရိ သတ်ကြီးရေ နန်းသီရိ မောင်ကတော့ တိုင်းရင်းသူလေး ဖြစ်ပြီး အမိုက်စား အချိုးကျကျ ခန္ဓာကိုယ် အလှတရား ပေါ်လွင်စေတဲ့အလန်းစား ပုံလေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေ အသည်းနှလုံးကို ဖမ်းစားထားတဲ့ မော်ဒယ်မ လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်တွေနဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေ ကတော့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ကြွေသွား စေလောက်တာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ဖြူဖွေးနေတဲ့ သားရည်နဲ့ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး တွေကြောင့်လည်း ပုရိသတွေကို ကြွေစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နန်းကတော့ သူမရဲ့ ဆွဲမက်စရာ ကောင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှတရား တွေကြောင့် ပရိသတ် တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နေလေးဖြစ်ပြီး
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှအပ တွေကြောင့် အမြဲအချစ်ပို စေသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ သာမန်model လေးတစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ အနုပညာ လောကထဲဝင် ရောက်လာခဲ့ ပေမယ့် သူမရဲ့ကြိုးစား မှုတွေကြောင့်အခု အချိန်မှာတော့ အားပေးသူ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိလာတဲ့ အနုပညာရှင် မလေးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု အခါမှာတော့ နန်းတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ ပုံတွေ တင်ပေးလာ ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပြီးလူကြိုက် များလာတဲ့ မော်ဒယ် အမိုက်စား လေးဖြစ် ပါတယ်။
နန်းကတော့ သူမရဲ့ ဆွဲမက်စရာ ကောင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှတရား တွေကြောင့် ပရိသတ် တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နေလေးဖြစ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှအပ တွေကြောင့် အမြဲအချစ်ပို စေသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။